Bit By Bit - Ukudala ukubambisana okukhulu - 5.2 kathisha Human
Imiklamo yokubala abantu ithatha inkinga enkulu, iyiphule ibe izingcezu ezilula, izithumele kubasebenzi abaningi, bese ihlanganisa imiphumela.
Amaphrojekthi wokubala abantu ahlanganisa imizamo yabantu abaningi abasebenzisa ama-microtasks alula ukuze baxazulule izinkinga ezingaba nzima kumuntu oyedwa. Ungase ube nenkinga yokucwaninga efanelekile ekubaleni komuntu uma ucabanga ukuthi: "Ngingakwazi ukuxazulula le nkinga uma ngabe nginabasizi bezinkulungwane ezicwaninga."
Isibonelo esibonakalayo somsebenzi wokuqamba komuntu i-Galaxy Zoo. Kule phrojekthi, izisebenzi zokuvolontiya ezingaphezu kwekhulu eziyikhulu zahlukanisa izithombe eziphathelene nezinkanyezi eziyizigidi ezihambisana ngokunemba okufanayo nasemibhalweni yangaphambili-futhi emincane kakhulu yizinkanyezi zezokwelapha. Lesi sikhwama esikhulekile esinikezwe ngokubambisana okukhulu senza ukutholakala okusha mayelana nendlela ama-galaxy akha ngayo, futhi yakha iklasi elisha lezinkanyezi ezibizwa ngokuthi "I-Green Peas."
Nakuba i-Galaxy Zoo ingase ibonakale kude nokucwaninga kwezenhlalo, empeleni kunezimo eziningi lapho abacwaningi bezenhlalo befuna ukukhokha, ukuhlukanisa, noma ukubeka izithombe noma imibhalo. Kwezinye izimo, lokhu kuhlaziywa kungenziwa ngamakhompyutha, kodwa kusekhona izinhlobo ezithile zokuhlaziywa okunzima kuma-computer kodwa kulula kubantu. Yilaba bantu-lula-abantu-okwamanje abanobunzima-computer-microtask esingawaphendukela kumaphrojekthi wokubalwa kwabantu.
Akuyona nje kuphela i-microtask e-Galaxy Zoo ejwayelekile, kepha isakhiwo sephrojekthi sivamile. I-Galaxy Zoo, kanye neminye imiklamo yokuqhathaniswa kwabantu, ngokuvamile isebenzisa isu lokuhlukanisa-isicelo-ukuhlanganisana (Wickham 2011) , futhi uma uqonda leli qhinga uzokwazi ukuyisebenzisa ukuxazulula izinkinga eziningi. Okokuqala, inkinga enkulu ihlukaniswe ezinengi zezinkinga ezincane. Khona-ke, umsebenzi wesintu usetshenziselwa inkinga encane ngayinye, ngaphandle kwamanye amacici. Okokugcina, imiphumela yalo msebenzi ihlangene ukuze ikhiqize isisombululo sokuvumelana. Njengoba sinikezwe lesi sizinda, ake sibone indlela isu lokuhlanganiswa-esebenzayo-lokuhlanganiswa esetshenziswa ngayo ku-Galaxy Zoo.